Global Voices teny Malagasy » Saripika: Nizara ny fitiavany ny permaculture tany Surinam izy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Aogositra 2018 11:46 GMT 1	 · Mpanoratra Kori Tuitt Nandika (fr) i Gwenaëlle Lefeuvre, Zo Razafy
Sokajy: Karaiba, Suriname, Fampandrosoana, Fanabeazana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Tanora, Tontolo_iainana
Vondrona mpankafy fomba fambolena tsy tapaka ao Kampong Baroe, ao suriname. Saripika nahazoana alalana avy amin'ny Permacultuur in Commewijne.
Nandritra izay telo taona izay, nampiasa ny fahalalàna mikasika ny “permaculture ” [fambolena tsy tapaka] i Alex Yakaumo mba hampianarana ny daholobe ny voajanaharin'i Suriname
Nampiasaina foana ny akora simika teo amin'ny sehatry ny fambolena tao ami'ny firenena. Kanefa ,araka ny fanadihadihana  nataon'ny International Institute for Sustainability [Ivontoerana Iraisampirenena ho amin'ny Fampandrosoana Lovainjafy] tamin'ny taona 2012  dia misy maro ny fomba ahafahan'ny fambolena lovainjafy mivoatra. Maro ny sakana tsy maintsy ihoarana, toy ny tsy fahampian'ny fiofanana.
Te hanova ny tantana AtoaYakaumo. Rehefa nahazo ny sertifikàn'ny famolavolàna ny fambolena tsy tapaka avy amin'ny Ivontoeram-Pikarohana Fambolena Tsy Tapaka Karaibeana ao Barbados ary nanapa-kevitra hanokam-potoana hampianarana momba ny tontolo iainana ara-pambolena mizaka tena sy manomana atrikasa any Commewijne, toerana ipetrahany.
Miorina eo amoron'ny reniranon'i Suriname ary akaikin'ny morontsiraka Atlantika, miara-miasa amin'ireo fikambanana hafa mitovy tanjona amin'izany eo an-toerana ankehitriny sy ireo foko avy any ambanivohitra ko ny kaominina misy azy. Manazava Atoa Yakaumo fa tsy manery ny olona hianatra ny fomba fambolena tsy tapaka izy. Miandry ny fahavononan-dry zareo handray ny fototra izy ka hanomboka ny fampiofanana.
“Zavatra tokony ho avy amin'ny olona izany satria olona ho an'ny olona,” hoy ny fanamafisany. “Koa tsy hanery na inona na inona aho, fa manolotra izany varavarana misokatra izany raha vonona ry zareo, dia afa-mandray anjara.”
Tafiditra ao anatin'ny tombontsoa lehibe raisin'ny olona mampihatra ny “permaculture” ny fahavitan-tena sy ny fanafoanana izay mety hitera-doza eo amin'ny olona sy ny tany amin'ny vokatra simika.
Afaka mahita vaovao sy manoratra ny olona raha raha te-handray anjara amin'ny lesona na atrikasa amin'ny alàlan'ny pejy Facebook -n'i Alex Yakaumo Permacultuur in Commewijne .
Niresaka ny asany tamin'ny Global Voices izy.
Alex Yakaumo. Saripika nomena sy nahazoana alalana avy amin'ny Permacultuur in Commewijne
Global Voices (GV) : Azonao hazavaina aminay ve ny tombontsoa azo avy amin'ny permaculture sy ny antony mahaliana izany aminao?
Alex Yakaumo (AY) : Tonga teto Suriname aho tamin'ny taona 2011 mba hiaina hahavita tena. Talohan'io aho niaina tao Holandy fa nandehandeha nitety tany nandritra taona vitsivitsy, indrindra tao India. Nanandrana ny tsiron'ny fahafahana aho – nahavita tena fotsiny izao – ka rehefa taty Suriname aho dia nitady fomba hambolena hatrany aho ka izany no nahitako ny “permaculture” [fomba fambolena tsy tapaka]. Nanomboka nitady lesona aho, ary ny faharoa kosa dia nanomboka tany Barbade any Karaiba tao amin'ny Ivotoerana momba ny Permaculture. Tena nanam-bintana tokoa aho.
Amiko, mampifandray ireo singa samihafa amin'ny natiora sy ny fomba ahafahan'izy ireo manatsara sy mandray soa amin'ny zavamananaina rehetra ny permaculture
Alex Yakaumo miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Commewije mandritra ny atrikasa. Saripika nomena sy nahazoana alalana avy amin'ny Permacultuur in Commewijne
GV:Inona avy ireo hevi-dehibe ifantohanao amin'ny fampiofanana ataonao?
AY: mifantoka amin'ny fampianarana ny olona hamboly tsy mampiasa vokatra sentetika aho amin'izao fotoana izao. Ity no teboka fanombohana satria tsy mahay afa-tsy ny mampiasa akora simika ny ankamaroan'ny olona any Suriname, ny zezika sy ny famonoana ny tsiparifary simika izay efa tena lalim-paka ao amin'ny rafitra. Ny hahatonga ny olona hahatakatra ny ilaina tany no tanjoko voalohany,mba hahafahan'izy ireo mahita ny tombotsoan'ny tany salama, ny mba hanajanonan'izy ireo ny fikarakarana (ny voliny)
Mpianatra mianatra ny fitsipiky ny premaculture ao amin'ny zaridainan'ny sekoly iray hiasan'i Alex Yakaumo. Saripika navoaka miaraka amin'ny fahazoan-dàlana nomen'i Permacultuur in Commewijne
GV:Olona firy no nasainao nandray anjara?
AY: Arivo eo ho eo hatramin'izao. Sahirana nampiofana ireo mpampianatra aho nandritra faran'ny herinandro nandritra izay roa volana izay. Mandray anjara amin'ny tetikasan'ny zaridainan'ny sekoly iray miaraka amin'ny fikambanana roa ihany koa aho. Tena mahaliana ny permaculture eto, satria mahafantatra ny ankamaroan'ny olona fa karakarana amin'ny akora simika ny legioma rehetra ka tena maniry ny hianatra fomba hafa izy ireo, saingy tsy misy olona mizara izany fahalalana izany. Ilainareo ihany ny mahafantatra ny toetran'ny natiora mba ahafahan'ny natiora miasa ho anareo fa tsy ny miady aminy. Feno ny fampianarako amin'ny ankamaroan'ny fotoana raha ho an'ny mponina vitsy (eto amin'ity faritra ity). Maro ihany koa ny olona tonga satria te hianatra hamboly izy ireo.
Alex Yakamo manome fiofanana mikasika ny permaculture ao Suriname. Saripika navoaka miaraka amin'ny fahazoan-dàlana nomen'i Permacultuur intao Commewijne
GV: Ahoana ny fomba ataonao amin'ny fampianarana ny permaculture?
Une femme arrose des pousses sur lit surélevé construit avec des ressources locales et selon les principes de la permaculture. Photographie fournie avec l'aimable autorisation de Permacultuur in Commewijne./ Vehivavy iray manondraka ny tsimoka amin'ny rihana natsangana tamin'ny loharano eo an-toerana sy araka ny fitsipiky ny permaculture. Saripika navoaka miaraka amin'ny fahazoan-dàlana nomen'i Permacultuur tao Commewijne
AY : Amin'ny fomba roa no anaovako azy. Tsy maintsy mampianatra aho aloha, mifototra amin'io no ahafahan'ny olona mandray anjara manao atrikasa. Ny lesoko dia taridalana amin'ny endrika iray amin'ny permaculture (fambolena mandavataona), izay antsoiko hoe zaridaina ekôlôjika. Izay no tena mahaliana ny olona amin'izao fotoana izao: ahoana ny hamboleny legioma ho azy ireo manokana. Ao amin'ny lesoko aho manasongadina ny maha-zavadehibe ny fikarakarana ny nofontany sy ny fitrandrahana ireo fomba samihafana ny Natiora Reny amin'ny fomba tsotra dia tsotra.
Hazavaiko ny atao hoe (nofon-)tany sy ny mahasarobidy azy. Avy eo, asehoko azy ireo ny sarin'ny zaridainako, ary ataoko ao ny zezika, mba ahitan'izy ireo izay azo tanterahina. Lazaiko azy ireo ny zezika sy ireo karazana famonoana ahidratsy sy parasy, ary manasa azy ireo aho handray anjara amin'ny atrikasa iray aho mba hahafahan'izy ireo mianatra manamboatra ny zaridainany avy amin'ny akora eo an-toerana toy ny rantsa-kazo, taretra sy ravina.
Tsy dia ara-teknika loatra izany. Fa natao io hahabe voho ny fahaizany, mba hahaizany bebe kokoa ny tsririn-kevitra.
Fanokafa-maso ny olona amin'izay efa ao aminy izany: efa nahita izany ny ankamaroan'izy ireo saingy tsy nampifandray azy ireny. Heveriko fa tena miteny amin'ny olona ny permaculture [fomba fambolena tsy tapaka]. Nefa dia mbola gaga foana aho amin'ny hamaroan'ny olona manatrika fampianarana.
GV : Inona no lafiny tsara indrindra amin'ny asanao ?
AY : Tiako ny mijery ny sarin'ny zaridainan'ny olona asehony ahy. Tiako indrindra ny mahita ankizy ao amin'ny fiaraha-monina mianatra mamboly zavamaniry toy izao. Avy amin'izany tena ahatsapako ny fahafinarena manao izany asa rehetra izany.
GV: Mampiasa ny tambajotra sosialy ve ianareo hanairana ny sain'ny olona na hampitomboana ny fandraisan-dry zareo anjara?
AY : Facebook no sehatra tambajotra sosialy ampiasaina indrindra eto. Tsy mpankafy loatra aho, saingy amin'ity tranga ity dia io fomba tsara indrindra hahazoana olona. Mitady fanampiana avy amin'ny matihanin'ny haino aman-jery sosialy aho izay te hanao ireny karazana famoahana ireny, mba hahafahako manara-maso ny zava-mitranga.
Eny an-tanan'ireto zazalahy ireto ny anana nambolena araka ny permaculture [manondro ny sora-baventy hoe “Ny zaridainan-pianarana”]. Saripika nampindramin'ny Permacultuur in Commewijne
Iray amin'ireo vokatsoa lehibe indrindra amin'ny permaculture ny fampiroborobona ny fifandraisan'ny fiaraha-monina. Saripika navoaka nampindramin'ny Permacultuur in Commewijne
GV: Inona ny tanjonao amin'ny ho avy?
AY : Te hanangana fikambanana antsoina hoe Wholesome Living( Fiainana mahasoa ) aho. Ahitana andry dimy ny Wholesome Living: ny fikarakarana ny fanahy, ny fampiasam-batana, ny fahalalana sakafo, ny permaculture na ny fiainana mifanaraka amin'ny natiora, ary ny fandraisana anjara tsara amin'ny fiaraha-monina. Izany no fomba fiainako.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/29/124119/
 ny fanadihadihana: http://www.iis-rio.org/media/publications/Report_Sust_Agr_Suriname_2012.pdf